China Mobile kongiri batching chirimwa fekitari uye bhizimisi Shantui
Iyo mobile kongiri yekusanganisa chirimwa ikongiri yekugadzira michina inosanganisa iyo yekuchengetera zvinhu, kuyera, kutakura, kusanganisa, kuburutsa uye otomatiki kudzora system yeiyo kongiri yekusanganisa chirimwa ine trailer unit;
Iyo mobile kongiri yekusanganisa chirimwa yakafanana neyese mashandiro enzira, mashandiro maitiro uye kugadzirisa kweiyo yakagadziriswa otomatiki kongiri yekusanganisa chirimwa; Panguva imwecheteyo, ine yakasarudzika hunhu hwekufamba-chinja kufamba, nekukurumidza uye nyore disassembly uye gungano, uye yakapusa yekuchengetedza manejimendi;
ndiwo mushini wakanyanya kugadziridzwa wekuvaka nharembozha yeruzhinji, mabhiriji, zviteshi, hydropower nemamwe mapurojekiti.
Ruzivo rwezvibereko m³ / h 50 75
Chisanganiso Mamiriro JS1000 JS1500
Simba rekutyaira Kw 2X18.5 2X30
Zvaikosha chinzvimbo （L） 1000 1500
Max. huwandu hwehukuru, Gravel / hurungudo mm, ≤60 / 80 ≤60 / 80
Batching bin Vhoriyamu m³ 4X8 4X8
Bhandi rinotakura rinokwana t / h 300 300
Kuyera huwandu uye kuyera kurongeka Aggregate kg 2000 ± 2% 3000 ± 2%
Simende kg 500 ± 1% 800 ± 1%
Makirogiramu emvura 200 ± 1% 300 ± 1%
Yakawedzera kg 20 ± 1% 30 ± 1%
Kuregedza kukwirira m 4 4
Yese simba kw 68 94
Pashure: Kusimudza bhaketi nharembozha
Zvadaro: Mvura chikuva kongiri batching chirimwa